03 / 03 / 2020 - RayHaber | raillynews
[28 / 03 / 2020] Başkentrayနှင့် Marmaray အပြင်ဘက်ရှိရထားဝန်ဆောင်မှုများကိုခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားသည်	06 တူရကီ
[28 / 03 / 2020] ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan ပယ်ချ	06 တူရကီ
ကျွန်တော်တို့၏ပထမဆုံးသော Trolley Bus 'Tosun'
အစ္စတန်ဘူလ်သည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကို ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များတွင်စတင်လက်ခံခဲ့သည်။ ထို့နောက် trolleybus လိုင်းများသည်တစ်မြို့လုံးပျံ့နှံ့သွားသည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ပထမဆုံးတည်ထောင်ခဲ့သော Trolleybus လိုင်း၏ပထမ ဦး ဆုံးလိုင်း [ပို ... ]
၆၅ နှစ်သက်တမ်းကဒ်သက်တမ်း ၅ နှစ်သက်တမ်းသည်မတ်လ ၃၁ ရက်၊ အသုံးပြုသူများသည်လက်မှတ်ဖြည့်သူများနှင့်လက်မှတ်စက်များမှIstanbulkartları၏ဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအခမဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၆၅ နှစ် [ပို ... ]
Izmir မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးမှထောက်ပံ့သော Izmir သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Hackathon ကိုမတ်လ ၆-၇ ရက်တွင်Havagazıစက်ရုံတွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာမြို့၏စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုသည့်အနေဖြင့်မြို့၏ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အတွက်ဆန်းသစ်သောအတွေးအခေါ်များဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမိုဘိုင်းအချက်ပြစနစ်ကို Emirgan လမ်းလျှောက်ဖြတ်ကူးရန်အချက်ပြ
lanlıurfa Metropolitan စည်ပင်သာယာသည်Atatürk Boulevard ရှိလမ်းလျှောက်သူများဘေးကင်းရေးနှင့်မော်တော်ယာဉ်သိပ်သည်းဆအတွက်အဖြေများကိုရှာဖွေရန်Şanlıurfaတွင်ပထမဆုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမိုဘိုင်းအချက်ပြစနစ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Zeynel Abidin Beyazgül၏အမိန့်အားဖြင့် [ပို ... ]
EGO ၏အခမဲ့ METU လက်စွပ်ပျံသန်းမှုများစတင်ပါပြီ
အသစ်တစ်ခုကို Ankara Metropolitan မြို့တော်ဝန် Mansur Yavas ၏ကျောင်းသား - ဖော်ရွေအလေ့အကျင့်မှဆက်ပြောသည်။ သမ္မတYavaş၏ညွှန်ကြားချက်အရ METU ၌ပညာသင်ကြားနေသောကျောင်းသားများအတွက်အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ အပတ်တိုင်း EGO ဘတ်စ်ကားများ [ပို ... ]
Afyon Gar - Kocatepe တက္ကသိုလ်ဒုတိယသမားရိုးကျရထားလမ်းလိုင်း ၁ အဆင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ - ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာစီမံကိန်းများတင်ဒါ TCDD ၇ ။ 7/2019 [ပို ... ]
Çayırdere Sinekli KurfallıKabakçaဘူတာလမ်းများတင်ဒါရလဒ်
Stateayırdere Sinekli KurfallıKabakçaဘူတာလမ်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်း TCDD တင်ဒါပြီးနောက်တင်ဒါရလဒ် ၁။ ဒေသဆိုင်ရာပစ္စည်းများညွှန်ကြားမှု (TCDD) 1/2019 KİKနံပါတ်numayırdere Sinekli [ပို ... ]
Haydarpaşaအလုပ်သမားများသည်လ ၃ လအတွက်လစာမရနိုင်ပါ
1,5 အကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် 1700 နှစ်အရွယ်သမိုင်းတစ်ဒေသထဲမှာထိတွေ့ခဲ့ Haydarpasa ရထားဘူတာမီးရထားလမ်းကိုချိတ်ဆက်တံ့သော Marmaray ရထားလမ်းတည်ဆောက်မှုကာလအတွင်း။ Haydarpaşaတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောသမိုင်းဝင်ဒေသရှိယဉ်ကျေးမှု [ပို ... ]
'' ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားလျှပ်စစ်ကားများကို Bursa ရှိ Bursa ခရိုင်တွင်ထုတ်လုပ်မည် '' သမ္မတ Recep Tayyip Erdogan ၏ the ၀ ံဂေလိအရစစ်တပ်areaရိယာကို Bursa Metropolitan Municipality ရှိစက်မှုဇုန်သို့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအစီအစဉ်ပြောင်းလဲမှု [ပို ... ]
မြို့တော်ဝန်Zorluoğlu Trabzon ၏ Dolmus စနစ်သစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Trabzon မြို့တော်စည်ပင်သာယာမှမြို့တော်ဝန် Murat Zorluoğluကမီနီဘတ်စ်ကားများခေတ်မီရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး ၇၂၉ ၁၀ + ၁ မီနီဘတ်စ်နှင့် ၁၂ + ၁ ထိုင်ခုံစွမ်းရည် [ပို ... ]
RayHaber 03.03.2020 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
YenikapıAtatürkလေဆိပ် Light Metro တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ကော်မရှင်လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လိမ့်မည်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းကိုယူလိမ့်မည်
ပထမဆုံးတင်ဒါနေ့ကို Kanal Istanbul တွင်ကြေငြာခဲ့သည်
ဗဟိုအစိုးရနှင့် Istanbul Metropolitan Municipality တို့ကိုအတူတကွပေါင်းစည်းစေသည့် Kanal Istanbul စီမံကိန်းအတွက်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကိုပထမဆုံးတင်ဒါရက်စွဲကိုကြေငြာခဲ့သည်။ တူးမြောင်း၏လွှမ်းမိုးမှုareaရိယာနှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတွင်သမိုင်းဝင်Odabaşıနှင့်Dursunköyတံတားများကိုရွှေ့ပြောင်းခြင်း [ပို ... ]
Kütahyaမှ Raybus ထိမှန်ခဲ့တဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုလူသား
Kütahyaရှိခရီးသည်တင်ရထားဖြင့်ထိမှန်ခဲ့သောအဘိုးအိုသည်မြင်ကွင်းတွင်သေဆုံးခဲ့သည်။ စက်ပြင်ဆရာကိုရဲစခန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ မတော်တဆမှုသည်Atatürk Boulevard မီးရထားလမ်းတွင် ၂၂ နာရီဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ Kütahya-Tavsanli လေ့လာရေးခရီးကိုသွားတဲ့ Raybus ကပြောဆိုပါတယ် [ပို ... ]
CHP မှ Deniz Yavuzyılmazက“ YHT အစုံ ၉ ခု၊ စက်ခေါင်း ၆၆၄ ခု၊ လျှပ်စစ်ရထား ၁၀၁ ခု၊ ခရီးသည်လှည်း ၉၅၂ ခု၊ ကုန်တင်လှည်း ၁၇၀၀၀” သည်အာမခံမရှိကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ [ပို ... ]
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကို Antalya အဆင့် ၃ ရထားလမ်းစနစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်
Antalya Metropolitan မြူနီစီပယ်တတိယအဆင့်ရထားလမ်းစီမံကိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Akdeniz တက္ကသိုလ် Meltem ဂိတ်တံခါးရှိကြမ်းပြင်လမ်းဆုံ၌ကတ္တရာပုံသွင်းခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ မြေအောက်ဘူတာသို့ Sakarya Boulevard နှင့်Batı Gar ဟုခေါ်သည် [ပို ... ]
İဇmirတွင်စစ်မှုထမ်းသောစစ်သားများနှင့်စစ်သားများသည်သူတို့၏စစ်မှုထမ်းနေစဉ်အတွင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ Izmir မြို့တော်စည်ပင်သာယာ ESHOT အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၊ ပြည်သူပိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည် [ပို ... ]
ယနေ့သမိုင်းတွင် - မတ်လ ၃ ရက် ၁၉၂၂ Mustafa Kemal Pasha
ယနေ့သမိုင်းတွင် ၃ မတ်လ ၁၉၂၂ Mustafa Kemal Pasha သည်ရထားလမ်းပေါ်ရှိဂရိအရာရှိများကိုတူရကီအရာရှိများနှင့်အစားထိုးရန် Konya ရှိမီးရထားအထွေထွေညွှန်ကြားမှုကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။
မီးရထားလမ်းသည်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုတွင် Corona အတားအဆီးကိုကျော်လွှားနိုင်သည်
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များကို Konya တွင်ပုံမှန်ပုံမှန်ပိုးသန့်ဆေးများပြုလုပ်သည်
Konya လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်ပိုင်ရှင်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှု .. !
Kocaeli ရှိ Corona Mobilization .. ! Overpasses ရောဂါကူးစက်ခံရသည်
ESTRAM မှကြေငြာချက် .. ! Eskart တင်ပို့သည့်ဘူဖေး၏အချိန်ပြောင်းလဲသွားသည်
Imamoglu: 'Kanal Istanbul တွင်လူမှုရေးသဘောတူညီမှုမရှိပါ
IMM သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် Coronavirus အစီအမံများကိုသေချာစွာစစ်ဆေးသည်
Marmaray စခန်းများတွင်တပ်ဆင်ထားသော Thermal Camera!
Başkentrayနှင့် Marmaray အပြင်ဘက်ရှိရထားဝန်ဆောင်မှုများကိုခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားသည်
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan ပယ်ချ
TCDD ဆက်သွယ်ရန်လိုင်း 444 8 233